Abavelisi bentsimbi ye-HR kunye ne-CR -I-China i-HR kunye ne-CR yentsimbi ababoneleli kunye neFektri
I-coil yentsimbi ebunjiweyo ye-SPCC CRC
Ingqele yentsimbi eqengqelekileyo iqengqele ngqo kuluhlu oluthile ngabaqengqeleki kubushushu obuqhelekileyo kwaye yaqengqeleka yekhoyili iphela ngumoya. Xa kuthelekiswa nekhoyili eshushu eqengqelekileyo, i-coil ebandayo ebunjiweyo inomphezulu oqaqambileyo kunye nokuguda okuphezulu, kodwa iya kuvelisa uxinzelelo lwangaphakathi, ngenxa yoko ihlala ifakwe emva kokuqengqeleka okubandayo.
I-CRNGO Ingqele eqengqelekileyo engakhange ijolise kwi-coil yesinyithi yentsimbi
Ingqele eqengqelekileyo engakhange ijolise kwisinyithi yintsimbi yi-ferrosilicon alloy enomxholo wekhabhoni. Kwipleyiti yentsimbi eyonakeleyo nengadityaniswanga, iinkozo zijolise ngokungacwangciswanga. Umxholo we-silicon we-alloy yi-1.5% ~ 3.0%, okanye isixa se-silicon kunye nomxholo we-aluminium yi-1.8% ~ 4.0%. Iimveliso zihlala ziqengqelekiweyo ziipleyiti okanye imicu enezinto ezibubunzima obuzi-0.35mm kunye ne-0.5 mm. Inempawu zokuqina okuphezulu kwemagnethi, amandla anyanzelekileyo okuphantsi kunye nomlingani omkhulu wokumelana, ke ilahleko ye-hysteresis kunye nelahleko yangoku ye-eddy zincinci. Isetyenziswa ikakhulu njengezixhobo zemagnethi kwii-motors, iiguquli, izixhobo zombane kunye nezixhobo zombane.